Geekbench မတိုင်မီ Vivo Nex2ပေါက်ကြားမှုစတင်ပြီ - SD845, 10GB RAM နှင့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များထုတ်ဖော်
Vivo Nex2ကို Geekbench တွင်၎င်း၏အဓိကနည်းပညာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
OPPO သည်၎င်း၏ SuperVOOC မြန်ဆန်သည့်အားသွင်းနည်းပညာကိုအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့ပေးအပ်လိမ့်မည်
OPPO မြန်နှုန်းမြင့် SuperVOOC ကို Android ရှိအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကအသုံးပြုခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung သည်အနာဂတ်ဖုန်းများအတွက် bezels မပါဘဲခင်းထားသောမျက်နှာပြင်ကိုခြယ်သထားသည်
Samsung မူပိုင်ခွင့်အသစ်ပေါ်ထွက်လာ ၎င်းတွင် bezel များမရှိဘဲဖုန်းများအားမှတ်ပုံတင်ခြင်းပါဝင်သည်။ ပေါ်လာသောမျက်နှာပြင်မှာစွဲငြိဖွယ်ဖြစ်သည်။
Google သည် Android4Ice Cream Sandwich အတွက်အထောက်အပံ့ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း Android4Ice Cream Sandwich သို့ဂူဂဲလ်မှပေးသောထောက်ပံ့မှု၏အဆုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
တရားဝင်: Vivo Nex2ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
Vivo သည်လက်ရှိ flasgship ကိုအောင်မြင်နိုင်မည့် Vivo Nex2မိုဘိုင်းကိုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ပစ်လွှတ်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
သုံးသပ်ချက် Huawei Mediapad M5 ကို Stylus နှင့် တွဲ၍ Lite တွင် iPad ကိုမငြူစူပါနှင့်။ ကောင်းပြီ၊ စျေးနှုန်း!
ဤအခါသမယတွင်သင့်အား Android tablet အသစ်ဖြစ်သော Huawei Mediapad M5 Lite ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုယူဆောင်လာသည်အပြင် ...
Nubia X ၏ 5G ဗားရှင်းကိုဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်ကြေညာမည်
CEO ဖြစ်သူမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောတရားဝင်ပိုစတာတစ်ခုအရ Nubia သည်ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် 5G Nubia X ၏ 10G ထုတ်ဝေမှုကိုတင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
PUBG Mobile version 0.10 ကို Virkendi snow map အသစ်ဖြင့်ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်
PUBG Mobile ၏ဗားရှင်း ၀.၀၀ တွင် ၀ င် ရောက်၍ ပါ ၀ င်သောသတင်းများနှင့်ပြည့်စုံသောနေ့ရက်သည် ...
HMD Global မှလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း Nokia ၏ရောင်းအားကိုပြသခဲ့သည်
HMD Global ၏အတည်ပြုချက်အရလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း Nokia သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိရောင်းအားများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
Nokia 3.1 Plus ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
စပိန်နိုင်ငံတွင် Nokia 3.1 Plus အားစတင်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ၎င်းတွင်စျေးနှုန်းနှင့်ဖုန်းကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သောစတိုးဆိုင်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Mediatek ၏ Helio M70 5G ကိုလာမည့်နှစ်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Mediatek သည် Helio M70 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကိုရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်လာမည့်နှစ်တွင်စတင်ဖြန့်ချီမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Xiaomi သည် Mi MIX5၏ 5G ဗားရှင်းနှင့် 3G ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုပြသသည်
Xiaomi သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောပွဲတစ်ခုတွင် Mi MIX53G နှင့် 5G ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုပြသသည်။ ကျနော်တို့ကဒီအသေးစိတ်ကိုချဲ့ထွင်!
အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ OnePlus သည်ဥရောပ၌5အစောပိုင်းတွင် Snapdragon 855 ဖြင့်ပထမဆုံး 2019G စမတ်ဖုန်းကိုစတင်မည်
OnePlus ၏အဆိုအရဥရောပ၌ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ Snapdragon 855 ကိုအခြားနာမည်တစ်ခုဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိမည်။
Samsung Galaxy A50 သည် Exynos 9610 နှင့်အတူ Geekbench ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
Samsung Galaxy A50 ကိုပိုမိုမြင့်မားသောအလယ်အလတ်အဆင့် Exyos 9610 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Geekbench ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
Honor ဖုန်းအသစ်တင်ဆက်မည့်နေ့ကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖန်သားပြင်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသောကင်မရာဖြင့်ရောက်ရှိမည်။
ဤသည်မကြာမီလာလိမ့်မည်ဟု Instagram ကို၏တော်လှန်ရေးသမားဒီဇိုင်းပြန်လည်
Android နှင့် iOS သို့မရောက်ရှိသေးသောဗားရှင်းသစ်ဖြင့် Instagram သည်၎င်း၏သတင်းလွှာအပြောင်းအလဲကိုရရှိလိမ့်မည်။
Nokia 8.1: ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ဟာအခုတရားဝင်ဖြစ်လာပြီ
Nokia 8.1 အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Nokia ၏ပရီမီယံအလယ်တန်းဖုန်းအသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ပစ်လွှတ်မှု။
တရားဝင်: Nubia Z17 သည်မကြာမီ Android Pie ရရှိမည်ဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်မှာ ZTE မှ Nubia Z17 သည် Android 9.0 Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုမကြာမီရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တရားဝင်တရားဝင်ဖြန့်ချိသည့် Meizu C9 သည် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်
Meizu C9 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီအနိမ့်အကွာအဝေးသစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုသိပါ။
Meizu M6T, အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးသောစမတ်ဖုန်းသစ်
Meizu M6T ကိုအိန္ဒိယတွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်ကိုသိ။
Xiaomi ၏ဥက္က48္ဌသည် ၄၈ MP ကင်မရာပါသောဖုန်းတစ်လုံးအားစတင်ရောင်းချရန်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်
Xiaomi သည် ၄၈ megapixel ကင်မရာနှင့်နောက်ကျောတွင် LED dual flash တပ်ဆင်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးထုတ်လုပ်မည်ဟုသမ္မတကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
AnTuTu Benchmark ၏အဆိုအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလ၏သြဇာအကြီးဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု
AnTuTu ကဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလရဲ့အားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ယောက်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်။ မင်းကိုပြတယ်!
BLU VIVO XI + ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် BLU VIVO XI +၊ ကင်မရာနှစ်လုံး၊ RAM 6GB၊ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အခြားအရာများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
Huawei သည်လာမည့်နှစ်တွင်ကမ္ဘာအနှံ့မှထုတ်ကုန်သန်း ၂၀၀ ခန့်တင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားသည်
Huawei သည်လာမည့်နှစ်တွင်ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာသန်း ၂၀၀ ခန့်တင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားသည်။ Xiaomi သည်၎င်း၏တင်ပို့ရောင်းချမှုတိုးမြှင့်ရေးကိုလည်းမျှော်လင့်နေသည်။
Snapdragon 855 သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာသည်
Snapdragon 855, Qualcomm မှအဆင့်မြင့် Android အတွက်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြစ်သော 5G နှင့်ပါ ၀ င်ပြီး7nm တွင်ထုတ်လုပ်သည်။
ဂူးဂဲလ်သည်နာမည်ကြီးအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကို Cheetah Mobile နှင့် Kika Tech မှဖယ်ရှားခဲ့သည်
Cheetah Mobile နှင့် Kika Techa မှကျော်ကြားသောအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကို Google Play စတိုးတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ သူတို့ကိုဂူဂဲလ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီ
Epic Games သည်၎င်း၏ Android ဂိမ်းစတိုးကိုစတင်ခဲ့သည်
လာမည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင် Android သို့လာမည့် Fortnite ဖန်တီးသူများထံမှ Epic Games Store၊ ဂိမ်းစတိုးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
The Honor Magic2သည်သင်၏အစားအစာထဲမှကယ်လိုရီများကိုသိရန်ခွင့်ပြုချက်အသစ်ရရှိသည်
Honor Magic2သည်စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစတင်၍ updates အသစ်များကိုလက်ခံရရှိနေပြီးတစ်ခုထက်တစ်ခုကတစ်ခုထက်ပိုတယ်။
Android Pie ကို Nokia 8 အတွက်နှောင့်နှေးခဲ့သည်။ သို့သော်သူရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်
Nokia 8 အတွက် Android Pie update ကိုနှောင့်နှေးခဲ့ပေမယ့် Nokia အမှုဆောင် Juho Sarvikas ကတော့မျှော်လင့်ထားသလိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။
Vingrup, ဗီယက်နမ်မှာအကြီးဆုံးနည်းပညာအုပ်စု, BQ အများစုလွှဲပြောင်းယူ
BQ ၏ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိအကြီးမားဆုံးသောနည်းပညာအုပ်စု Vingrup လက်သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုဆိုလိုသည်။
စနေနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားက 5G ကွန်ယက်ကိုစတင်ဖြန့်ချိမှာဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးစီးပွားဖြစ်စတင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်
တောင်ကိုရီးယားသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုအနိုင်ယူရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ၊ 5G နည်းပညာကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy A8s တွင်တင်ဆက်မှုရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်
Samsung က Galaxy A8s ၏ပထမဆုံး in-display ကင်မရာဖုန်းကို Huawei မတိုင်မီဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာမည်။
Huawei Enjoy9၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုမဖြန့်ချိမီစီစစ်ထားသည်
Huawei Enjoy9၏ပုံရိပ်များနှင့်အတူဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Enjoy9Plus ၏စံနှုန်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Samsung Galaxy S10 Plus ဖြစ်သည်။ အသစ်ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကင်မရာ ၅ ခုကိုစစ်ထုတ်သည်
ဒီပြန်ဆိုချက်တွေက Samsung Galaxy S10 Plus ကိုပြသမှာပါ။ ကင်မရာ ၅ လုံး၊ Infinity-O အမျိုးအစားပြသမှုနှင့်အခြားအရာများ။
Google Hangouts အသုံးပြုသူများသည် Hangouts Chat နှင့် Meet သို့ပြောင်းမည်
အက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်မထောက်ပံ့တော့ပါကမည်သည့်အပလီကေးရှင်းများက Google Hangouts ကိုအစားထိုးမည်ကိုရှာဖွေပါ။
MediaTek မှ Helio P90 သည်တင်ဆက်မှုရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်
MediaTek ပရိုဆက်ဆာအသစ်ဖြစ်သော Helio P90 ၏တရားဝင်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Motorola One, ဒီအလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တရား ၀ င်အလုပ်ဖြုတ်နိုင်သည့် Google Hangouts messaging app ၏အဆုံးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ပြင်သစ်သည်ဓါတ်ရောင်ခြည်အလွန်ထုတ်လွှတ်သောဖုန်း ၈ လုံးကိုစစ်ဆေးသည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Asus ZenFone Max Pro M2 နှင့် ZenFone Max M2 တို့တွင်တွေ့ရှိရသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကလာမည့် Asus ဖုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ။ ၏စက်ရုံ ...
နောက်ထပ် Vivo ဖုန်းသည်ပုံရိပ်များတွင်လုံးလုံးပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်သည်
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Vivo စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးသည်ထိုင်ဝမ်ရှိ NCC ထံမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။
Pixels ၏ Portrait Mode ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဂူဂဲလ်မှဖန်တီးခဲ့သောကင်မရာ ၅ ခုနှင့်အထူးကိစ္စဖြစ်သည်
Pixel5၏ Portrait Mode ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ကင်မရာ (၅) လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များသည်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့နှင့်နောက်သို့သွားရန်အမူအယာသည် Android အတွက် Chrome သို့မကြာမီလာမည်
Chrome မှာ navigation gesture နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ forward and back ။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပိုကီမွန် GO, ဤသည် Community Day အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်
ပိုကီမွန် GO ကို Community Day အတွက်အသစ်တင်သည်ပိုကီမွန်အမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပိုကီဒက်စ်ထဲသို့ထည့်ရန်လိုက်ရှာရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
အတည်ပြုသည် - Huawei သည် Android နှင့်အစားထိုးလုပ်ဆောင်နေသည်
တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Huawei သည် ၄ ​​င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် operating system တွင်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Android အတွက်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်ကိုရှာဖွေပါ။
လျှောက်လွှာတွင်နေ့စဉ်သင်သုံးစွဲရသောအချိန်ကိုစစ်ဆေးရန် Facebook ရှိလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာမှုလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
Epic Games ဂိမ်း Fortnite မှစွဲလမ်းမှုသည်အလွန်များပြားသဖြင့်လူအများစုကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆင်တူသည်ဟုဆိုကြသည်။
OnePlus3နှင့် 3T သည်အသစ်သောအသစ်စက်စက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကျည်ဆန်အမျိုးအစား C နားကြပ်နှင့်အခြားအရာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်
OnePlus3နှင့် OnePlus 3T အတွက်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ဖြန့်ဝေမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ update ကို OxygenOS 5.0.7 အဖြစ်လာသည်။
အတည်ပြုပြီး - MWC19 တွင်ခေါက်သိမ်းနိုင်သောစမတ်ဖုန်းကိုထုတ်ဖော်ရန် Oppo
တရားဝင် - Oppo ၏စီအီးအို၏အဆိုအရကုမ္ပဏီသည် 2019 Mobile World Congress တွင်ခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်။
OnePlus 6T McLaren Edition သည် 10 GB RAM နှင့် 256 GB Internal memory နှင့်အတူရောက်ရှိမည်
အစီရင်ခံစာသစ်တစ်ခုအရ OnePlus ၏နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော OnePlus 6t McLaren Ediion သည် 10GB RAM နှင့် 256GB ROM တို့ဖြင့်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လာလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံး Google Maps သည်ဘေးဘက်လမ်းညွှန် menu ကိုအသစ်ပြောင်းသည်
Moto G7 Power သည် ၅၀၀၀ mAh ဘက္ထရီနှင့်ပိုမိုသည်
Motorola ၏ Moto G7 Power ကို FCC မှအသိအမှတ်ပြုထားပြီး ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိအားလုံးအသေးစိတ်လိုပဲ။
Android 9.0 Pie သည် Nokia 8 နှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်
Nokia 8 သည် Geekbench တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး Android9Pie ကို၎င်း၏ operating system အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Moto X4 သည် Android9Pie ကိုစတင်အဆင့်မြှင့်တင်သည်
Moto X4 ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံက Android9Pie ကို update လုပ်ဖို့စတင်နေပြီဖြစ်လို့လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူကထုတ်ကုန်အားလုံးထံရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Mediatek မှ Helio P1 ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သော Realme U70 သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်
Realme U1 သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး Helio P70 ဖုန်း၏အင်္ဂါရပ်များ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုအားလုံးကိုသိရှိပါစေ။
Huawei Nova4သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုစစ်မှန်သောရုပ်ပုံများဖြင့်အတည်ပြုသည်
Huawei Nova4၏အစစ်အမှန်ပုံရိပ်များကိုပေါက်ကြားခဲ့ပြီး embedded front camera အတွက်ထူးခြားသော၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်။
UMIDIGI One Max သည် Helio P23 နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သည်
UMIDIGI One Max သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာအသစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကိုသိရှိရန်။
Nubia Red Magic Mars ဂိမ်းသည်တရားဝင် 10GB GB RAM နှင့်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်
Nubia Red Magic Mars သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းမိုဘိုင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကိုသိရှိရန်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ Samsung Galaxy S9 တွင် Android9Pie beta ကိုယခုသင် install လုပ်နိုင်သည်
Samsung Galaxy S9 ရှိသူများသည် beta ကို ယနေ့မှစ၍ ရရှိနိုင်သောကြောင့် Android9Pie ကိုခံစားနိုင်သည်။
Huawei သုံးစွဲသူများသည် Apple သုံးစွဲသူများထက်ငွေအမြောက်အများပိုများကြောင်းလေ့လာမှုအသစ်အရသိရသည်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို 3D ဇာတ်ကောင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပါ - ZEPETO - chat၊ စျေးဝယ်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ
Gepeto အက်ပလီကေးရှင်းက Zepeto လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကို 3D ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Samsung Galaxy S10 Plus သည် Exynos 9820 နှင့်အတူ AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသည်
Samsung Galaxy S10 Plus သည် Exynos 9820 နှင့်အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏အင်အားအကြီးဆုံးဖုန်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
လိုပဲ Tik Tok မှစစ်မှန်အခြားရွေးချယ်စရာ
Tencent Games သည်နို ၀ င်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်တရုတ်ပြည်၏နာမည်အကြီးဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သော Honor of Kings အားစစ်မှန်သောအမည်ဖြင့်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
Xiaomi Mi 8 SE သည် Geekbench တွင် Android Q နှင့်အတူပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် OS ကိုဖြန့်ချိသောအခါ update ကိုလက်ခံလိမ့်မည်
Xiaomi Mi 8 SE ကို Geekbench တွင် Android Q operating system ဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤ Android ဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်လိုက်သည်နှင့်သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Huawei မှပထမဆုံးဖုန်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ကအပေါက်လေးတစ်ခုဖြင့်ဖွင့်လှစ်တော့မည်။ Samsung သည်ပြိုင်ပွဲရှုံးမည်
Huawei သည်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်၌အပေါက်တစ်ပေါက်ဖြင့်ပြင်ဆင်နေသည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ပွဲဝင်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Samsung ကိုသာကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ အခြားပုံမပေါ်ပါက HTC သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုဆက်လက်ရောင်းချမည်
2019 သည် HTC အတွက်၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များအရမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ဖြင့်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆက်ပြီးအခိုင်အမာဆက်လက်ပြောဆိုမည်ဖြစ်သော်လည်းအခက်အခဲဆက်ရှိနေသေးသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု။
သင်၏ Android ကိုခရစ်စမတ်အတွက်ညှိခြင်း - ခရစ်စမတ်ဖုန်းမြည်သံကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
ကင်မရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ဖုန်းလား။ LG ကမူပိုင်ခွင့်တစ်ခုတည်းပဲ
LG ၏မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ၊ ထောင့်ပေါင်းစုံမှဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးရန်နောက်ကင်မရာ ၁၆ လုံးပါသောဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်
SPC Baamba Gyro 4.0 သည်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ဖြစ်သည့် Alexa နှင့် Google Assistant ပါ ၀ င်သည်
Alexa နှင့် Google Assistant တို့နှင့်လိုက်ဖက်သော Baamba Gyro 4.0, SPC စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
OUKITEL WP1 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
OUKITEL WP1 ကိုစမ်းသပ်ပြီးကင်မရာနှစ်လုံး၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း၊ ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် IP5.000 အသိအမှတ်ပြုခံထားရသော“ ကြမ်းတမ်းသည့်ဖုန်း” ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် Huawei နှင့် Samsung နီးကပ်လာခြင်း
ဤဈေးကွက်ကဏ္segmentမှ Samsung နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိနေသော Huawei ၏ရောင်းအားတိုးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Pixel3Lite သည် Pixel3ဘေးရှိဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင်တင်ထားသည်
ဖုန်းအကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသောအခါ၎င်းတွင် "Sargo" ကုဒ်နံပါတ်ရှိပြီး၎င်းသည်အစောပိုင်းကာလတွင်ဖြစ်သည်။
Wiko View2Go၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအတွက်တန်ဖိုးနည်းသောဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
Wiko View2Go သည် Wiko ၏မျက်နှာပြင်အားလုံးအား ၀ င်ရောက်မှုအကွာအဝေးသို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခြင်း၊ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဤစမတ်ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
Realme U1 သတ်မှတ်ချက်များ - MediaTek ၏ Helio P70 နှင့်ထိုထက်ပိုသောအရာများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
Realme U1 သည်၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်များနှင့်အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Mediatek Helio P70 နှင့်အခြားအရာများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ထုတ်လုပ်သူများအကြားစွဲလမ်းမှုအသစ်သည် Lenovo သည်နောက်ကင်မရာသုံးလုံးပါသောဖုန်းကိုမှတ်ပုံတင်သည်
နောက်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကတော့လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်မှာပါ ၀ င်မှာပါ။ ၎င်းသည်နောက်ကင်မရာသုံးဆနှင့် high-end အသစ်ကိုပြသမှာဖြစ်ပြီး Lenovo ပါ။
Huawei P Smart 2019 သည် Kirin 710 နှင့်ထပ်မံပေါက်ကြားခဲ့သည်
Huawei p Smart 2019 သည်ရှစ် core core Kirin 710 နှင့်အတူကွန်ရက်ထဲသို့ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
SK Hynix သည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး DDR5 DRAM module ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်လုပ်မည်
DDR4 ၏နှစ်ဆဒေတာအမြန်နှုန်းစတုတ္ထမျိုးဆက်ဟုလူသိများသည့်လက်ရှိမျိုးဆက်သည်ဆက်ခံသူဖြစ်ပြီး DDR5 DRAM module များဖြစ်သည်။
မက္ကဆီကိုရှိပထမဆုံး Xiaomi စတိုးသည်အဖွင့်ရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၌ပထမဆုံး Xiaomi စတိုးဖွင့်လှစ်ခြင်းအကြောင်းကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
ColorOS 6.0 သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာသည်။ bezel-less ဖုန်းများအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါး၊ တောက်ပမှုနှင့်အသစ်ပြုပြင်ထားသော user interface ဖြစ်သည်
Oppo သည်၎င်း၏စိတ်ကြိုက်အလွှာသစ်ကိုတရားဝင်တင်ပြီးဖြစ်ပြီး ColorOS 6.0 ဖြစ်သည်။ ဤအသစ်အဆန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအားလုံးကိုသိရှိထားပါ။
Ball Pack သည် Ketchapp Games မှနောက်ထပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Ball Pack သည် Ketchapp Games မှပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျပန်းဂိမ်းများအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုဂိမ်းစတူဒီယိုဖြစ်သည်။
ယခုဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Chuwi HiPad ကိုယူရို ၁၂၀ ကျော်ဖြင့်ရနိုင်သည်
ငါ Unboxing နှင့် Chuwi HiPad ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များတွင်ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်း၊ သင့်အားပြောပြရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
Samsung Galaxy A9 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
စပိန်နိုင်ငံတွင် Samsung A9 ရောင်းချမှုကို Samsung ကကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ကိုအသေးစိတ်သိရှိပါ။
Movilshacks တွင်အကောင်းဆုံးသောကြာနေ့သည် Black ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သော Movilshacks ၌ရှိသောသောကြာနေ့မှ Black သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုရှာဖွေပါ။ ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် ၇၀% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။
Huawei သည်အနာဂတ် Honor စမတ်ဖုန်းများ၏စံပြအမည်များကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။ ဤသတင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
Samsung ၏ 'Galaxy M' စီးရီးသည်ဘဝ၏လက္ခဏာများကိုစတင်ပြသခဲ့သည်။ Galaxy M2 သည် Geekbench တွင်ပေါ်လာသည်
Samsung Galaxy M2 သည် Geekbench တွင် quad-core Exynos 7885 နှင့်အတူပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုသိ
Meizu 16S ကိုသီးခြားဂီတချစ်ပ်ပါတဲ့ adapter နဲ့အတူထုတ်လုပ်မှာပါ
Meizu ၏စီအီးအို Jack Wong က Meizu 16S အားသီးခြားဂီတချစ်ပ် adapter ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ရှာတွေ့သည်!
Monument Valley2နှင့် Motosport Manager3ကို€ 0,90 ဖြင့်ရောင်းချသည်
၇ ရက်ကြာသည့်တိုင် Monument Valley7နှင့် Motosport Manager2နှစ်မျိုးလုံးကို Google Play Store တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။3အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂိမ်း။
Qualcomm ၏ Snapdragon4ကိုဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင်ပြသမည်
ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် Qualcomm မှနောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Snapdragon4ကိုမိတ်ဆက်မည်။ ၎င်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ဂိမ်းမျက်နှာပြင်ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့် PlayJ၊ Sony အက်ပလီကေးရှင်းမျှဝေနည်း
Sony က PlayJ အစီအစဉ်ကိုဖြန့်ချိလိုက်ပြီ။ သူကမင်းရဲ့ဂိမ်းတွေကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကင်မရာကိုရယ်မောနိုင်မယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဝေမျှပေးတယ်။
နို ၀ င်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် TheAwards 2018 ၏ပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုတွင်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာများနှင့်ဂိမ်းများကိုအနိုင်ရရှိသူများကိုရှာဖွေပါ။
ဒီ Amazon Music Unlimited ပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပြီး ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိ Prime Video နှင့် Kindle Unlimited ကဲ့သို့သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Motorola One သည်မက္ကဆီကိုရှိ Android Pie ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
Android 9.0 Pie သည်မက္ကဆီကိုရှိ Motorola One သို့နို ၀ င်ဘာလတွင်လုံခြုံရေး patch နှင့်အတူ update ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
512GB Asus ROG ဖုန်းကိုယူအက်စ်တွင်ရောင်းနိုင်ပြီ
512GB သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏရှိသော Asus ROG ဖုန်းကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိထားပါ။
Fortnite သည်ဂိမ်း mode အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည် 'Wild West' ဖြစ်သည်။
Fortnite သည်ဂိမ်းသစ် mode ကို Wild West ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၎င်းတွင်အင်္ဂါရပ်များ၊ လက်နက်များနှင့် obtehos အသစ်များပါ ၀ င်သည်။ အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါ
Meizu 16S ၏ပထမ ဦး ဆုံး rendering သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားသွားသည်။ နောက်ကင်မရာသုံးဆနှင့် notch သို့မဟုတ် bezels များမရှိတော့ပါ။
Meizu 16 တွင်ဆက်ခံသူရှိသည်။ Meizu 16S ၏ rendering သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအလွန်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်အချို့ကိုဖော်ပြသည်။
Google Pixel သည် AI နှင့်ဖြေကြားသည့်ခေါ်ဆိုမှုများ၏မှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်
ဂူဂဲလ် Pixels တွင်သိမ်းဆည်းထားသောမှတ်တမ်းများဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများ၏အကြောင်းအရာကိုမသိရှိခြင်းမှသင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျကျကယ်တင်နိုင်သည်။
Google Pixel3တွင်ပြနာများဆက်ရှိနေသည်။ ယခုတွင် bug သည်ကင်မရာကိုပိတ်ထားသည်
Pixel3ရှိအမှားတစ်ခုကကင်မရာကိုရပ်တန့်စေပြီးဖုန်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအသစ်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
PUBG Mobile သည် ၀.၉.၅ အထိအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ၁၀၀ player hardcore mode နှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်သည်
PUBG မိုဘိုင်းရာသီ4သည်မနက်ဖြန်လာမည်၊ သို့သော်ယခုသင် PUBG မိုဘိုင်းအပ်ဒိတ်အသစ်၏ hardcore mode အသစ်ကိုခံစားနိုင်သည်။
OxygenOS Open Beta7သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် OnePlus6ကိုရောက်ရှိသည်
OnePlus6အသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းသောသတင်း: OxygenOS Open Beta7သည်ယခုစက်ပစ္စည်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပြီ။ ၎င်းကိုယူဆောင်လာသည့်သတင်းကိုသိထားပါ။
Meitu သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ရှေ့ကင်မရာသုံးလုံးပါလာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်ချဲ့ထွင်။
Oppo ၏ 'Hyper Boost' အရှိန်မြှင့်နည်းပညာသည်အနိမ့်ဆုံးဖုန်းများသို့မကြာမီလာတော့မည်
Oppo သည် Hyper Boost အရှိန်မြှင့်နည်းပညာကိုအနိမ့်ဆုံးဖုန်းအမျိုးမျိုးတွင်မကြာမီဖြန့်ချိမည်။ အသေးစိတ်ကိုသိ
YOYO စွမ်းရည်များကြောင့် Honor Magic2သည်မောင်းသူမဲ့ကားကိုထိန်းချုပ်သည်
Honor Magic2သည်၎င်း၏ Virtual Assistant 'YOYO' ၏စွမ်းရည်များကြောင့်ကားမောင်းသူမရှိပဲကားကိုကိုင်တွယ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသိ
အမ်နာနိုနှုန်းသစ်သည်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ SMS နှင့် ၃GB ဒေတာအတွက်တစ်လလျှင် ၁၄.၉၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
ဖောက်သည်များအတွက်ပုံမှန်ခရစ္စမတ်ပွဲတော်အပြင် Amena ၏ယနေ့နို ၀ င်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်သောနှုန်းထားများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
X Mixomi က Mi Mix 2S မျက်နှာပြင်တောက်ပနေသောပြproblemနာကိုတုန့် ပြန်၍ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသည်ကိုရှင်းပြသည်
ကင်မရာအပလီကေးရှင်းမှဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရိုက်ကူးသည့်အခါ Xiaomi Mi Mix 2S မျက်နှာပြင်ပြproblemsနာများရှိသည်။ Xiaomi ကဒါကိုတုံ့ပြန်လိုက်ပြီ
PUBG Mobile သည် Golden Joystick 2018 ကိုအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းအဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
PUBG Mobile သည် 2018 ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး Mobile Game အတွက် Golden JoyStick ကို၎င်း၏အကြီးဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Fortnite နှင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအတွက်အတော်လေးဆုတစ်ခု။
Nubia သည်နို ၀ င်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Red Magic Mars ဖြစ်သည်
Nubia သည် Red Magic အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုလာမည့်နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ကျင်းပမည့်ပွဲတစ်ခုတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒီသတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုသိပါရစေ။
ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Nokia9PureView ကိစ္စများက 5-Camera Setup ကိုအတည်ပြုပါ
ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်ကင်မရာ ၅ ခုမှာ Nokia5PureView ပါ ၀ င်မှာဖြစ်ပြီးဒီမိုဘိုင်းနဲ့သုံးနိုင်တဲ့ဆီလီကွန်အမှုအရာများအရသိနိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည်အနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက် Orange နှုန်းထားလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်
အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်အနက်ရောင်သောကြာနေ့ကိုကျင်းပရန် Orange အော်ပရေတာကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးကိုပြသသည်
Motorola One, ဒီ Motorola ဈေးနှုန်းချိုးဖောက်မှု၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Motorola သည် One model နှင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီးထူးကဲသောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်စွမ်းရည်ရှိသော terminal ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်။ ငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတာမင်းကိုပြောပြမယ်။
အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီ Mbuynow YN-035P ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Mbuynow ပြင်ပဘက်ထရီကိုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစွမ်းရည် ၂၀၀၀၀ mAh သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆို ၇ ဆအထိအားသွင်းနိုင်သည်။
အတည်ပြုခဲ့သည် - Asus ZenFone Max Pro M2 သည်ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာမည်။
Android Pie သည် ဆက်လက်၍ ချဲ့ထွင်လျက်ရှိသည် - ယခု Xiaomi Mi A2 နှင့် Motorola Moto One Power တို့အတွက်ရနိုင်သည်
Android Pie ကို Xiaomi Mi A2 နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Motorola One Power တို့တွင်တပ်ဆင်ရန်ယခုရရှိနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + တို့သည် Android Pie - မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုအခြေခံသည့် One UI ၏ beta ကိုရရှိသည်
Samsung ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာအသစ်ဖြစ်သော One UI ၏ beta ဗားရှင်းကို Galaxy S9 နှင့် S9 + တို့အတွက်ရရှိနိုင်ပြီး Android Pie ကိုအခြေခံသည်။
Xiaomi Redmi Note 10၊ Redmi Note 4X နှင့် Redmi Note4Pro တို့တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်သော MIUI6ဗားရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Xiami Redmi Note 10၊ Redmi Note 4X နှင့် Redmi Note4Pro တို့အတွက် MIUI6Global Stable ၏ download နှင့် installation link များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ROMs ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
Huawei သည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး 5G ခေါက်သိမ်းနိုင်သောစမတ်ဖုန်းကို MWC 2019 တွင်ပြသမည်
Huawei က၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Mobile World Congress တွင်မိတ်ဆက်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
လက်တင်အမေရိကအတွက်သတင်းကောင်း - UMIDIGI သည်လာမည့်အနက်ရောင်သောကြာနေ့ကိုနိုင်ငံအများစုအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်းလာမည်။
Qualcomm ၏ Snapdragon 8150 သည် 360K ရမှတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီး AnTuTu တွင်ရှိသည်
Qualcomm ၏ Snapdragon 8150 သည်လူကြိုက်အများဆုံးအခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် AnTuTu ရှိအမှတ် ၃၆၀,၀၀၀ မှတ်စံချိန်ထက်ကျော်လွန်သည်။
Huawei ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ခွဲသည် Honor သည်၎င်းသည် Singles Day တွင်ရောင်းအားနှင့် ၀ င်ငွေအရထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ၏ Galaxy A7, ကင်မရာသုံးလုံးနှင့်မျိုးဆက်သစ် panel တစ်ခုပါ ၀ င်သော terminal သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေပြီး၎င်းစမတ်ဖုန်း၏ထူးခြားပြောင်မြောက်ဆုံးသောအချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
Huawei သည် voice assistant အသစ်ကိုစျေးကွက်သို့သယ်ဆောင်ရန်နာရီနှင့်ချီလုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျနော်တို့ကဒီအသေးစိတ်ကိုချဲ့ထွင်။
YI 4K + Action ကင်မရာကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
YI Technology Action Camera ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ YI 4K + သည်ထူးခြားသည့်အရာတစ်ခု၊ 4K recording ကို 60 fps နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
စမတ်ကားများနှင့်စမတ်စက်ရုံများအတွက် 5G စံနှုန်းများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်
5G စံနှုန်းများကိုနောက်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီးချိတ်ဆက်ထားသောကားများနှင့်စမတ်စက်ရုံများအတွက်တံခါးများဖွင့်ပေးလိမ့်မည်ဟု Samsung ကပြောကြားခဲ့သည်။
သတင်းကောင်း - OnePlus5နှင့် 5T သည်မကြာမီ Android Pie ကိုရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်
သင် OnePlus5or 5T ပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲသင့် Device ပေါ်ရှိ Android Pie သို့ Update ကိုလက်ခံရရှိတော့မှာပါ။
Meidu သည် Snapdragon 8150 ဖြင့်ဖုန်းကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်
အချို့သောကောလာဟလများအရ Meizu သည် Snapdragon 8150 ဖြင့် terminal ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည့်ပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Honor Magic2ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး EMUI 9.0 ကို Magic UI 2.0 ဖြင့် Android Pie ဖြင့်အစားထိုးသည်
Honor Magic2သည်နောက်ဆုံးပေါ်လက်မှတ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သော Magic UI 2.0 အောက်ရှိ Android Pie ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေသည်။
အဓိကအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Asus Zenfone Max Pro (M2) နှင့် Zenfone Max M2 အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
လာမည့် Asus ဖုန်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Zenfone Max Pro (M2) နှင့် Asus Zenfone Max M2 အကြောင်းပြောနေသည်။
Huawei သည် EMUI ကိုဆက်လက်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီး၎င်း၏ထုတ်ကုန်အများစုအတွက်ကိုယ်ဟန်အမူအရာထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဓိကအသစ်ထပ်ထည့်သည်
Netflix bombshell - မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်သာစျေးပေါသောနှုန်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုများ
ယိုစိမ့်မှုများက Asus သည် tripen camera နှင့် 10″ Chrome OS tablet နှင့် Zenfone ကိုပြင်ဆင်သည်
အမျိုးမျိုးသောထင်မြင်ချက်များအရ, တရုတ်ကုမ္ပဏီ, Asus, ၎င်း၏ catalog ထဲမှာဖုန်းနှင့်အတူဖုန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှု ...
Samsung Galaxy S10 Lite ရှိမယ်
Samsung သည် Samsung Galaxy S10 Lite ကိုတီထွင်နေသည်။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် hardware အချို့ပါရှိသည့်၎င်း၏နောက်ထပ် flagship ၏ decaf version ဖြစ်သည်။
တစ်လအတွင်းမှာပဲ Alibaba ဟာအမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံကို Singles's Day မှာတင်ခဲ့သည်
တနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့သော Singles Day ရောင်းအား၏ပထမနာရီတွင် Alibaba သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးရရှိခဲ့သည်။
Xiaomi Mi9၏ rendering သည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်
Xiaomi Mi9၏ rendering သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Samsung ၏ Galaxy S10 နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်စွဲမှတ်ထားရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Samsung သည် Galaxy S10 ကိုအဆင်သင့်အနေအထားတွင်ထားမည့်နည်းပညာအသစ်များဖြင့်လာမည့် Galaxy SXNUMX ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
Android Q သည် split screen တွင်တိုးတက်မှုနှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည်
Android Q မှာ display screen ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်။ လာမည့်ဂူဂဲလ်လည်ပတ်မှုစနစ်ကလုပ်ဆောင်မည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
Oukitel U23 သတ်မှတ်ချက်များ
နောက်တစ်ခု Oukiel ကုမ္ပဏီဖြစ်သော U23 မှနောက်ထပ် terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါမည်။
OnePlus ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်နာမည်အသစ်အောက်တွင် 5G ဖုန်းတစ်လုံးစတင်ရောင်းချမည်
5 ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်အမည်အသစ်နှင့်အတူ OnePlus မှဤအသစ်စက်စက် 2019G XNUMXG ဖုန်းစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က Galaxy M ဖုန်းများကိုမကြာမီဖြန့်ချိမည်
Samsung အနေဖြင့်လာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သော Galaxy M ၏မျိုးဆက်သစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
မကြာမီသင်သည် ၁၀ မိနစ်အတွင်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှပေးပို့သောစာများကိုဖျက်သိမ်းနိုင်လိမ့်မည်
မကြာမီသင်သည် Facebook မှတစ်ဆင့်အများဆုံး ၁၀ မိနစ်အတွင်းသင်ပို့သောစာများကိုပယ်ဖျက်နိုင်လိမ့်မည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
ပေါက်ကြားမူပိုင်ခွင့်အသစ်အရ Huawe သည်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ရှေ့ကင်မရာကိုပေါင်းစပ်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Android ရဲ့ share menu ကမကြာခင်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Google ကဒီတည်နေရာကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
သတင်းကောင်း။ Android Pie သည် Sony Xperia XZ Premium, XZ1 နှင့် XZ1 Compact တွင်လာသည်။ သင်၏စက်တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုပြသပါမည်။
Google Pixel3မှာပြproblemsနာတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်။ အခုအားသွင်းနေတုန်းအပူလွန်ကဲသွားတယ်
Google ရဲ့ Pixel3မှာအားသွင်းဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ အမျိုးမျိုးသောသုံးစွဲသူများမှတင်ပြခဲ့သည့်အချက်အလက်များအရအပူလွန်ကဲသည့်အခါပိတ်ပစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG Q9 သည်ဤဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည်
LG Q9, MWC 2019 တွင်ပြသနိုင်မည့်ကိုရီးယားကုန်ပစ္စည်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ဒီဇိုင်းကိုပြသထားသော render တစ်ခုသည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ Galaxy S8 နဲ့ Galaxy Note 8 က One UI ကိုရလိမ့်မယ်
Samsung ၏ One UI interface အသစ်သည်နောက်ဆုံး၌ Galaxy S8 နှင့် Note9သို့ရောက်လာလိမ့်မည်။
Samsung ကဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် fingerprint sensor ကိုလောင်းမည်
လာမယ့်နှစ်မှာ Samsung ကသူ့ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားမှာအသုံးပြုမယ့်လက်ဗွေဆင်ဆာအမျိုးအစားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်နို ၀ င်ဘာ ၉ ရက်တွင် Mi 8 Pro နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူယူကေတွင်တရားဝင်ပွဲထွက်မည်
Xiaomi Mi 8 Pro ကိုဗြိတိန်တွင်နို ၀ င်ဘာလ ၉ ရက်တွင်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူပွဲထုတ်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဒီပစ်လွှတ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပါ။
သင့်မှာ Galaxy S8 ဒါမှမဟုတ် Note 8 ရှိရင် Samsung ရဲ့ interface သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ One UI ကုန်သွားပြီ
UI One သည် Android Pie နှင့်အတူ Galaxy S9, Note9နှင့်နောက်ဆက်တွဲ Galaxy S10 သို့ပေါင်းထည့်သော interface အသစ်ဖြစ်သည်။ Galaxy S8 ကိုတော့မသုံးဘဲထားခဲ့တာပါပဲ။
Infinity မျက်နှာပြင်နှင့်ခေါက်ထားသည့်မိုဘိုင်းသည်ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည် notch ကိုသုံးသော Samsung ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအားလုံးကိုအရူးဖြစ်စေသည်။
Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer နှင့် Mi MIX 2S တို့သည်ကင်မရာ 'Night Mode' ကိုပိတ်ထားသော beta တွင်ရရှိကြသည်။
Xiaomi Mi Mix3၏ Night Mode သို့မဟုတ် Night Mode ကိုမကြာမီတွင် Mi 8, Mi 8 Explorer နှင့် Mi Mix 2S တို့တွင်ရရှိနိုင်သည်။
ဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက်သင် BQ ပစ္စည်းကိုယူရို ၁ ယူနစ်ရနိုင်သည်။ သင်က Black List အတွက်စာရင်းသွင်းပြီးနေ့တိုင်းအမြန်ဆုံးဖြစ်ဖို့လိုသည်။
OUKITEL ဖုန်းများအတွက် ၁၁.၁၁ လျှော့စျေး၏အားသာချက်ကိုယူပါ
၁၁.၁၁ အခါသမယတွင် OUKITEL ဖုန်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ ၄ င်း၏စမတ်ဖုန်းအမျိုးမျိုးတွင် ၅၀% အထိလျှော့စျေးများ။
Xiaomi သည်နိုင်ငံခြားစျေးကွက် ၈၂ ခုတွင်ရှိသည်
Xiaomi သည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် ၄ ​​င်း၏အောင်မြင်မှုကိုနိုင်ငံခြားဈေးကွက် ၈၂ ခုတွင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့် Nokia 8.1 သည်နိုင်ငံတကာဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သော Nokia X7 ၏နိုင်ငံတကာဗားရှင်းဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်လက Nokia သည် Nokia X7 စမတ်ဖုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အခုတော့ဖင်လန်ကုမ္ပဏီကအလုပ်လုပ်နေတယ်။
Xiaomi AirDots Youth သည်ယူရို ၃၀ အောက်သာရှိသည်
Xiaomi AirDots Youth သည်အာရှကုမ္ပဏီတခု၏နားကြပ်အသစ်ဖြစ်ပြီး AirPods နှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း ၂၅ ယူရိုဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည်။
နောက်ခံကင်မရာငါးခုပါသည့် Nokia9၏ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးမှုနှင့်ပုံရိပ်အသစ်များပေါ်လာသည်
HMD Global ၏လာမည့်အလံ Nokia9တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ဗီဒီယိုပြန်ဆိုခြင်းနှင့်ပုံရိပ်အသစ်များဒီမှာရှိနေသည်။
Google သည် Pixel3ကို update လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး memory ပြmemoryနာများကိုဖြေရှင်းမည်
Pixel3၏မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်အသစ်ဖွင့်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများထပ်မံ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အသစ်ပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
eBay တွင်အကောင်းဆုံးအရောင်းအဝယ်များဖြင့် ၁၁.၁၁ ကိုရှေ့တွင်ရယူပါ
11.11 တွင် eBay တွင် Android ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်များကို အသုံးချ၍ လူကြိုက်များသောစတိုးတွင်ဤနေ့ရက်ကိုစောင့်စရာမလိုဘဲအသုံးပြုပါ။
သင်၏ Google Home အတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားကိုငှားရမ်းပါ
သင့်မှာဂူဂယ်လ်မူလစာမျက်နှာအိမ်မှာရှိလား။ ဂူဂဲလ်ရဲ့ virtual assistant မှအကောင်းဆုံးရနိုင်မှုကိုရှာဖွေပါ။
Motorola Moto One ကိုယခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရနိုင်သည်
Motorola Moto One ကိုယခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရနိုင်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု၏အသေးစိတ်ကိုသိပါ။
Android9Pie၊ နောက်ကင်မရာငါးခုနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည့် Nokia9PureView ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Nokia9PureView သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ယိုစိမ့်နေသည်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Android 9.0 Pie operating system နဲ့ "Olympic" ဆိုတဲ့ကုဒ်နံပါတ်ပါရှိပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမှလာမည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာဖြစ်သော Honor V20 နှင့်အတူလာမည့်အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်သည်။
POPTEL P10 အားသုံးသပ်ခြင်း
ကြမ်းတမ်းစွာကြမ်းတမ်းသော IP10 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ RAM 68 GB၊ NFC ဆက်သွယ်မှုနှင့်€4အောက်ထက်များစွာပိုသော POPTEL P200 အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြောပြပါမည်။
Samsung ၏ခေါက်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုနိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင်ကြေညာမည်
Samsung ကမိုဘိုင်းဖုန်းကိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နှစ်ရက်အတွင်းခေါက်ထားသည့်မျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖြစ်လာမယ့်ကိရိယာ။
Qualcomm ၏ SM7150 နှင့် SM6150 အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Qualcomm တွင် SM7150 နှင့် SM6150 တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဖွင့်ဖို့ဒီလာမည့်စုံတွဲပေါ်ပေါက်ကြားအသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
OnePlus 6T သည်မကြာမီအရောင်သစ်နှင့်ရောက်လာလိမ့်မည်
ယခုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ယိုစိမ့်ပြီးနောက် OnePlus 6T ကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည့်အရောင်သစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android အတွက် Google Chrome တွင်စကားဝှက်များကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းပြီးစီမံခန့်ခွဲရမလဲ
Android အတွက် Google Chrome တွင်စကားဝှက်များနှင့်ဆင့်တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းပြီးဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးမဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာ။
Samsung Galaxy S10 ၏ဒီဇိုင်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
ကောလာဟလအသစ်တစ်ခုအရ Samsung Galaxy S10 ၏ဒီဇိုင်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုဆိုကြသည်။ ဤလတ်တလောထုတ်ပြန်ချက်အသေးစိတ်ကိုသင်တို့အားပြောပြပါမည်။
Google Assistant သည် 2019 မတိုင်မီအထိ Sonos စပီကာသို့ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
Sonos စပီကာများ၏ Google Assistant နှင့်ယခုပေါင်းစည်းမှုကိုကုမ္ပဏီမှထုတ်ပြန်သည့်အတိုင်းလာမည့်နှစ်အစတွင်စောင့်ဆိုင်းရမည်။
ဥရောပရှိ Xiaomi Mi 8 Lite ၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Xiaomi Mi 8 Lite ကိုမတူညီသောဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ဥရောပ၌ဖြန့်ချိမည်ဆိုပါကစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei သည်ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့တတိယသုံးလပတ်မှာဘယ်လောက်ရောင်းခဲ့သလဲဆိုတာရှာကြည့်ပါ။
Mate 20 Pro သည် EMUI 9.0.0.126 ကိုတိုးတက်မှုများစွာဖြင့်လက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်
Huawei Mate 20 Pro သည်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ်ဆင့် EMUI 9.0.0.126 ကိုလက်ခံရရှိသည်။ သင်၏စက်တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
ထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားသည်မှာ WhatsApp တွင်ကြော်ငြာများပြသရန်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်
WhatsApp မှကြော်ငြာများပြသမည်ဟုထပ်မံအတည်ပြုသည်။ လူအများစုအတွက်ဒီမကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ Chris Daniels ပြောတာတွေကိုရှာပါ။
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ တွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ ခု၊ AnTuTu Benchmark အရ
Xiaomi Black Shark နှင့်အခြားသောသူများသည်ယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်စွမ်းအားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု၏ AnTuTu ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည်။
သင်၏ Android ဖုန်းမဖွင့်ပါကသင်ဘာစစ်ဆေးသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းမဖွင့်သောအခါစစ်ဆေးရမည့်ရှုထောင့်များကိုရှာဖွေပါ၊
Xiaomi Black Shark Helo သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိတော့ပါ။ Nubia Red Devils eSport ကိုနိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်
အတည်ပြုလိုက်သည် - ယခုနို ၀ င်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် Nubia Red Devils eSport ကိုဂိမ်းစမတ်ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ်စတင်မည်။ ၎င်းတွင် RAM6GB ရှိလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy A7 (2018) ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များနှင့်ဖြုတ်ခြင်း
Samsung Galaxy A7 (2018)၊ အလယ်အလတ်အကွာအဝေးရှိကင်မရာသုံးလုံးပါသော terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအနေဖြင့်သင့်အားဝေမျှလိုပါသည်။
MediaTek ၏ပထမ ဦး ဆုံး 5G ပရိုဆက်ဆာသည်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲရှိသည်
ပထမ ဦး ဆုံး MediaTek ပရိုဆက်ဆာကို 5G နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကအတည်ပြုသည့်အတိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်တွင်ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည်။
'clamshell' ဖုန်းဖြစ်သော Samsung W2019 သည်စတင်မိတ်ဆက်မည့်နေ့ရက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ လာမည့်နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်တွင်ဖြစ်သည်
အတည်ပြုလိုက်သည်။ လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် Samsung သည်တရုတ်နိုင်ငံ၌ပွဲတစ်ခုကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဆမ်ဆောင်းအားဆမ်ဆောင်း W9 ကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi ဖုန်းများသည် Yoigo သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်
Xiaomi နှင့် Yoigo တို့အကြားသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများကိုအော်ပရေတာနှင့်စတင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလတွင် CES 2019 တွင်တရားဝင်ပြုလုပ်သော LG ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်း၏ထုတ်ဖော်ပြသသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Honor Waterplay 8 သည်ရေစိုခံနိုင်သောတက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်
Honor သည်စျေးကွက်အတွင်းအလွန်ဈေးကြီးသောကင်မရာနှစ်လုံးပါသည့်ရေစိုခံတက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Honor Waterplay 8 ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
TWS ကုမ္ပဏီ၏ကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည့်အခြားနည်းလမ်း (၃) ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။ သင်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါသလား။
Android Pie ကို Nokia 6.1 Plus အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Nokia 3,5နှင့်6သည်နောက်ပိုင်းတွင်လက်ခံရရှိရန်အတည်ပြုခဲ့သည်
ကောင်းမွန်သောသတင်း! Nokia 6.1 Plus သည် Android 9.0 Pie ကိုတရားဝင်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အခြားကိရိယာများလည်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
RTS Command & Conquer: ပြိုင်ဘက်များမှဒဏ္Decemberာရီဒီဇင်ဘာ ၄ တွင်လာမည်
Command & Conquer: ပြိုင်ဘက်များကိုဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင်အီလက်ထရောနစ်အနုပညာမှကောင်းစွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် freemium မော်ဒယ်လ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာမည်။
ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်တွင်ဆိုနီသည်ဖုန်း ၁.၆ သန်းရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်
Sony သည်စမတ်ဖုန်းကဏ္sectorတွင်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကုမ္ပဏီသည် Q1.6 တွင်ဆိပ်ကမ်း ၁.၆ သန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
Nokia 7.1 ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တရားဝင်ရောင်းချသည်
Nokia 7.1 ကိုမြောက်အမေရိကပိုင်နက်တွင်တရားဝင်ရရှိနိုင်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိဤ terminal ၏အသေးစိတ်နှင့်စျေးနှုန်းကိုသိထားပါ။
Nokia 6.1 သုံးစွဲသူများအတွက်သတင်းကောင်း - Android9Pie ကိုယခုဖုန်းတွင်ရရှိနိုင်သည်
Nokia 6.1 သည် Android 9.1 Pie ၏တည်ငြိမ်သော version ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤသတင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
သငျသညျတွစ်တာ၏ "likes" ကြိုက်လျှင်, သူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ဟုစဉ်းစားပါ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရက်စွဲအတိအကျမရှိသော်လည်း၊ တွစ်တာအထက်ပိုင်းများမှ“ like” ကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ကြီးစွာသောအမိန့်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
Google Maps navigation ၏အမှောင်ဆောင်ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲ - မြေပုံအက်ပ်တွင်ဘာအသစ်လဲ
လမ်းညွှန်မှုအတွက်အမှောင်ထုကိုဖွင့်နိုင်ရန် Google Maps ကိုအဆင့်မြှင့်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ခေတ်မှီသောပုံစံရှိသည်။
Xiaomi သည်ဂိမ်းရှေ့တွင်ရောက်နေသည်။ Pocophone F1 သည် Android Q ကိုစတင်သောအခါ Android Q ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
Pocophone F1 ကို Android Q သို့ဖြန့်ချိမည်ဆိုပါကကုမ္ပဏီ၏အကြီးအကဲတစ် ဦး မှအတည်ပြုချက်အရသိရသည်။
Samsung Galaxy S10 ကင်မရာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်
Samsung သည်မျိုးဆက်သစ် ISOCELL အာရုံခံကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည် Samsung Galaxy S10 ကင်မရာကိုတပ်ဆင်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Xiaomi Mi 8 Lite သည်၎င်း၏ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါပြင်သစ်နှင့်ယူကရိန်းတွင်ရနိုင်သည်
Xiaomi Mi 8 Lite ကိုပြင်သစ်နှင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြန့်ချိသောအရာကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus 6T ၏နောက်ခံပုံများယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
OnePlus ၏ပထမ ဦး ဆုံး 5G ဖုန်းသည်ဖြန့်ချိသည့်ရက်ဖြစ်သည်
OnePlus သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းကိုဥရောပတွင်စတင်မိတ်ဆက်သည့်နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။ တံဆိပ်သည်ဈေးကွက်တွင်ပထမဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်နှစ်တွင် 5G ဖုန်းကိုအဘယ်ကြောင့်မဖွင့်နိုင်ကြောင်း Meizu ကရှင်းပြသည်
လာမည့်နှစ်တွင် 5G ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့် terminal ကိုမဖွင့်နိုင်ကြောင်း Meizu ကရှင်းပြသည်။ ဒီအတည်ပြုချက်အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိပါ။
Oukitel U23: အနောက်ဘက်တွင်အရောင်တောက်တောက်နှင့် gradient
Oukitel ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်မှာ U23 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနောက်ဘက်တွင်ထူးခြားချက်တစ်ခုနှင့်အနောက်ဘက်ရှိအရောင် gradient ကိုထင်ရှားစေသည်။
AnTuTu သည်လာမည့်အဆင့်မြင့် Honor Magic2၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Honor Magic2၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်မကြာသေးမီက AnTuTu တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီလာမယ့် high-end အကွာအဝေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
Android Oreo သည် Android ဖြန့်ချိမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်အသစ်တွင်ဒုတိယအများဆုံးအသုံးပြုသောဗားရှင်းဖြစ်သည်
ဂူဂဲလ်မှထုတ်ပြန်သော Android ဖြန့်ချိမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ Android Oreo သည်ဒုတိယအများဆုံးအသုံးပြုသည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Huawei Mate 20 Pro၊ ကင်မရာနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအလံဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Huawei Mate 20 Pro သည်သုံးစွဲသူများ၏မျက်လုံးကိုအာရုံစူးစိုက်စေသည်။
သင်၏မိုဘိုင်းမှ FC ဘာစီလိုနာနှင့်ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
ဘာစီလိုနာနှင့်ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်တို့ကိုယနေ့ညအောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်၊
ယူကေရှိပထမဆုံး Xiaomi စတိုးသည်အဖွင့်ရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်
ယူကေရှိ Xiaomi စတိုးကိုနိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးစတိုးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Mi3နှင့် Mi Mix 8S တွင် Xiaomi Mi Mix2ကင်မရာရှိရန်
Ciaomi Mi 8 နှင့် Mi Mix 2S တို့သည်နောက်ဆုံးထွက် Mi Mix3၏ကင်မရာကိုရရှိစေမည့်အဓိက update ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
PUBG Mobile နှင့် Fortnite စတိုင်ဖြင့် Xiaomi ၏ဂိမ်းသစ် Survival Game
Xiaomi: Survival Game - PUBG နှင့် Fortnite နှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုပုံပန်းသဏ္giveာန်ဖြစ်စေသည်။
Huawei သည်မြင့်မားသောကြောင့် Mate 20 ၏ DXOMark ရမှတ်ကိုကြေငြာခြင်းမပြုခဲ့ပါ
Huawei ၏ Mate 20 ၏ DXOMark ရမှတ်များလွန်းသောကြောင့်ထုတ်ဖော်မပြခဲ့ပါ။ အသေးစိတ်လေ့လာပါ။
Oppo A7: ဘတ်ဂျက်လျာထားငွေဘတ်ဂျက်အလယ်အလတ်နီးကပ်သည်
Oppo A7 ၏အင်္ဂါရပ်များ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုထပ်မံပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီလာမယ့်စက်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိထားပါ။
ဒါက Samsung ရဲ့ခေါက်မိုဘိုင်းကိုသတ်မှတ်နေပုံ